Ogaden News Agency (ONA) – Zenawi IYO TPLF oo loo aasay Qaabkii Xayle SELASSIE 38 Sanno kadib. taarikh Xasuus Mudan
Zenawi IYO TPLF oo loo aasay Qaabkii Xayle SELASSIE 38 Sanno kadib. taarikh Xasuus Mudan
Qormadan Waxa ku eegi Doona Asaaski TPLF, iyo waxay iska Shabahaan Haile Selasie hallaagi ku dhacay 1974 oo ah waqtigi Ururka TPLF la asaasay.
Kadib markii Xanuun aan horey loo shaacinin oo dilaa ah laga helay Males Zenawi ayaa muddo laba todobaad gudahood ah waxaa cirka isku shareeray xaalada Wadanka Ethiopia. Iyada oo xanuunka ku yimid Zenawi la gaadhsiiyay heer illaa hadda dowlada sii dhacaysa ee Ethiopia aysan ka hadlin su’aalo badan oo wadankaas horyaala oo ay kamid tahay inay caddeeyaan In Zenawi dhintay iyo inkale.
Wadanka Ethiopia ayaa wali si cad u sheegin in Males Zenawi noolyahay iyo inkale waxa ayna sugayeen sida la sheegay in bal uu bad baado iyo inkale. Hadiiba xataa Males Zenawi xanuunkan uusan u dhiman waxaa soo baxday in Zenawi xilka wadanka Ethiopia uusan sii heyn doonin. Arrintan caafimadkisa laxidhiidha awgeed oo uu noqday nin tabargabay oo malaku mawdkiisa uun sariirtisa ku sugi. Waxaana loolan siyaasadeed oo aad u xoog badan iyo khilaaf banaanka usoo baxay dhex yimid ururka TPLF oo isku heysta qofkii badali lahaa Males Zenawi.
Waxaa markiiba soo baxday in Xaaska Males Zenawi oo kamid ah Gudiga fulinta ee ururka TPLF lasaaray xanibaad dhinaca socdaalka ah, waxaana lagu wargaliyay inaysan wadanka ka baxi karin. Waxaa kale oo xanibaad taas lamid ah la saaray xubno kamid ah Golaha dhexe ee Ururka TPLF oo qaar badan ay socdaal ku tagi rabeen wadamo Afrika ah. Waxaana il gooni ah lagu eegaya dhamaan masuliyiinta TPLF oo cabsi badan jirto in dhexdooda ay is khaarajiyaan.
Cabsida TPLF halkey lug ku leedahay:
Waxaa ururka TPLF caan ku yahay khilaafka ururka dhexdiisa ah, waxaana horey ururkan TPLF khilaafyo xoogan uu soomaray lagu dilay masuuliyin sarsare oo ururka TPLF kamid ah. arrintaas ayaa waxa ay keentay in cabsi badan dhexdooda soo kaladhex gashay isna aamini waayaan. Hadaba si Madaxda TPLF Wadanka uga fakanin ayaa lasoo rogay in qof kamid ah Gudida Fulinta TPLF ama Golaha Dhexe ee TPLF uusan ka baxi karin wadanka.
Waxaa kale oo ururka TPLF cabsi ka qabaa kacdoon looga horyimaado Taliska TPLF. Ururka TPLF aya aqoon badan u leh waxyaalaha keena in dadku ka faa ideystaan kacdoon ka iman kara isbadalka siyaasi ee ku yimada marka Madaxa wadanku dhinto. iyaga oo goob joog ka ahaa Waqtigii Haile Selleasie la dilay ee Mangistu Haile mariyum kusoo booday xilka wadanka Ethiopia si lama filaan ah. Xayle Selassie Ayaa dhintay 28 August 1975.
Waqtigaas ayaa waxaa kajiray wadanka Ethiopia kacdoon ay shacabka Ethiopia kaga horyimaadeen Boqortooyadii Xayleselasie ee dhaxaltooyada boqolaalka sano usoo jirtay. Shacabka Ethiopia oo ay kamid yihiin ciidamada Ethiopia ayaa kahor yimid Taliski Xayle Selasie. Waxaana kacdoonkaas ka dhex dhashay ururo badan oo qolo kastaaba wadato danahooda goonida ah. Tusaale ahaan Kacdoonku waxa uu kasoo bilowday Dhulka Eritrea waxa uuna kusoo fiday gudaha Magalada Addis Ababa iyo Ciidamada. Waxaa kale oo ciidamada dhexdooda ka bilowday Ciidamo raba inay xilka la wareegaan. Kacdoomadaas boqolaalka qowmiyadood ee Ethiopia ku nool ay midkastaba teeda ku raadsaneysay ayaa waxay keentay in laga tuuro xilka Xayle Selasie oo gurigiisa lagu xabsiyo taarikhdu markay aheyd 12 September 1974. Waxaana waqtigaas iyada ah ilaa laga gaadhay bisha November si rasmi ah looga qaaday xilka Xayle Sellasie iyada oo xabsiga loo taxaabay isaga iyo dhamaan eheladiisa iyo qarabadisa. Waxaana lagu xidhay reerkisa xabsiga Cabsida badan ee ALAM BAQA oo ah Kabadkaa dhamaa. Waqtigaas iyada ah waxaa la dilay caruurtu awoowga u ahaa Xayle Selasie si aysan waa danbe u sheegan boqortooyo waana la dabar jaray. Sido kale waxa la dilay laba Ra isul wasaare oo wadanka Ethiopia soo maray.
Hadaba taliska TPLF oo isna ahaa dadkii ka faa ideystay isbadalada ka dhacay Ethiopia waqtigaas indhahana u furmeen oo arkeen inay urur noqon karaan balse awood dari ay heysay ayaa dhalinyaro tigree ah oo wax ka barata Jaamacada Addis Ababa oo 7 ardey ahaa waxay ku dhawaaqeen magaca Ururka Tigray National Organisation. Waxaa dadkaas kamid ahaa ururka ku dhawaqay Wasiirki hore arrimaha Dibada Ethiopia Siyum Mesfin oo ninkan Zenawi la yiraahdo ka xayuubiyay talada xisbiga TPLF oo uu ku xigeen ka ahaa iyo midkii wasiirnimada arrimaha Dibada Sanadkii 2010ka. Ururkaas TNO ayaa isubadalay February 1975 magaca TPLF. Waxayna go’aansadeen in Ethiopia lagu qabsan karo kaliya awood daggaal, midaas oo ay ku guuleysteen sanadkii 1991.
Hadaba Ururka TPLF ayaa waxa uu indhahiisa ku arkaa Ra isal wasaarihii Ethiopia oo cafimaad daro u dhimanaya Sidii Haile Selassie. Shacabkii Ethiopia oo sidii xilka looga tuuray Haile Selassie dhamaantood kacsanyihiin. oo waliba islaam iyo gaalo, oromo iyo Axmaaro iyo waliba Awooda Ogadneiya oo la maquunin karin ay xoog ku dagalamayaan.
Ifafalada iyo cabsida soo foodsaartay Taliska TPLF ayaa keentay in ay ku mashquulaan sidii badbaado u raadsanlahaayeen. ama ugu dhiman lahaayeen. Waxaana iyaga oo u diyaar garobin dhacdooyinkan ay hoostooda ka bilaabatay.
Su’asha ayaa ah, Magaaladii Ururkan ka bilowday miyuu ku burburi doona. Qaabkee ayayse taariikhdu isu celisay. Yaa Ka faa ideysan doona. Ma ONLF. Ma Oromo. Mise Axmaarada Dibada Joogta.
Jawaabta waxa aan arki doona Goorma. Ma sidii Xalyle Selessie tabtiisii ayay mari doonta oo Sanado ayay qaadan. Waxaa xasuus mudan in Waqtiyadi u danbeysay ee xayle Sellasie uu shirka OAU uu ka dhacay magaalada Addis Ababa aadna looga deyriyay Nolosha Xayle Sellasie iyo kacdoonka shacabkiisa loogasoo horjeeday. oo lamid ah tan maanta ka taagan Ethiopia. Waxaa kale oo Xasuus mudan in Dowlada Ethiopia waqtigi haile Sellasie ay dhahen waxa uu u dhintay cudurka Cancer-ka la yiraahdo oo qalniin Xanuun awgiis loogu sameyay ayuu u dhintay Haile Sellassie.